'मान्छे बाँचेका छन्, ठमेल भने मरिसक्यो'
‘मान्छे बाँचेका छन्, ठमेल भने मरिसक्यो’
प्रकाशित : 3:46 pm, सोमबार, भदौ ७, २०७८
काठमाडौं। कोरोना महामारीको चपेटामा विशेषगरी साना तथा मझौला व्यवसायहरु परेका छन् । यिनमा पनि मूलरूपमा विदेशी पर्यटन सम्बद्ध व्यवसायहरु नराम्ररी थला परेका छन् । झण्डै २ वर्षयता नेपालमा विदेशी पर्यटकहरुको आवागमन ठप्पप्रायसः छ ।
विदेशी पर्यटकहरु केन्द्रित राजधानीको मुटुमा रहेको ठमेल क्षेत्र कोरोना महामारीले नेपालमा सबैभन्दा बढी प्रभावित पारेको क्षेत्र मध्येको हो । यो क्षेत्र आजभोलि शून्यप्रायः छ ।
यहाँका रेष्टुरेन्ट, ट्राभल एन्ड टूरस् र पर्यटन लक्षित व्यवसाय महामारी शुरु भएदेखि नै ठप्प छन् । विस्तारै साना व्यवसायहरु सञ्चालनमा आउन थालेको भएपनि दिनमा ‘दुई रूपैयाँको पनि व्यापार नहुने’ उनीहरूको भनाइ छ ।
विदेशी पर्यटकहरूले भरिभराउ हुने ठमेलका गल्लीहरू अहिले सुनसान छन् । नेपाली पस्मिना, विभिन्न कलाका सामानहरूले सजिएका पसलहरू अहिले पर्यटकहरूको पर्खाइमा छन् । तर कहिलेदेखि नेपालमा पर्यटकिय गतिविधि चलायमान होला भनेर यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।
सरकारले कोरोनाले थलिएको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि विभिन्न घोषणाहरु गरेको भए पनि वास्तविक असर परेका व्यवसायलाई भने त्यस्ता घोषणाहरुले छुन सकेका छैनन् । घोषणा केवल कागजमै सीमित रहेको अवस्था छ, कम्तीमा सामान्य व्यवसायीहरुका लागि ।
१८ वर्ष देखि ठमेलमा पस्मिनाको व्यापार गर्दै आएका कैलाश शाक्य महामारीले व्यवसाय नै धराशायी बनेको बताउँछन् । ‘कोरोनाले व्यवसाय नै खाइदियो । अहिले व्यापार शून्य छ’ उनले भने, ‘सामान किन्ने मान्छे कोही आउँदैनन् । स्वदेशी त छैनन्, विदेशी कहाँबाट आउनु, यस्तो बेला ।’ उनले सरकारले घोषणा गरेका पूर्नकर्जा लगायत अन्य राहत कार्यक्रमहरुका बारे आफूलाई केही थाहा नभएको बताए ।
सोही ठाउँका व्यवसायी श्रद्धा शेख घरबाट पैसा ल्याएर सटरको भाडा तिर्ने गरेको बताउँछन् । अघिल्लो लकडाउनमा घरबेटीले भाडा छुट दिए पनि अहिले भने कुनै छुट नपाएको उनले बताए । ‘अहिले दुई रूपैयाँको व्यापार छैन । घरबाट पैसा ल्याएर भाडा तिर्नु परेको छ’ उनले भने, ‘सबैलाई यस्तै छ । मान्छे बाँचेका छन्, ठमेल भने मरिसक्यो ।’
दश वर्ष देखि ठमेलमा ट्राभल एन्ड टूर्स व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका विकास श्रेष्ठ कोरोनाले व्यवसाय अस्तव्यस्त बनाइदिएको बताउँछन् । उनीसँगै पहिले काम गरेकाहरु अहिले कहाँ पुगे उनलाई नै थाहा छैन । ‘सबै व्यवसाय सकियो, महामारीले रोजगारी गुम्यो,’ उनले भने, ‘साथिहरु कहाँ पुगे पत्तै छैन् । मान्छे कोही छैनन् यहाँ बसेर के गर्नु ?’
ठमेल विकास परिषदका उपाध्यक्ष राजुमान डंगोलले ठमेलको व्यवसाय अहिले शून्य अवस्थामा रहेको बताउँछन् । ‘अब त भन्न पनि के भन्नु जस्तो भैसक्यो । व्यवसाय नै बन्द गनुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘ठूलो संख्यामा मानिसले रोजगारी गुमाएर भारत लगायत अन्य ठाउँहरुमा पुगिसके ।’
अब पर्यटक कसरी ल्याउने, कोरोनाको प्रभाव न्युनिकरण हुँदै छ भनेर पर्यटकहरुलाई कसरी प्रभावित पार्ने र अब विस्तारै पर्यटकिय गतिविधिहरु कसरी बढाउँदै लैजाने भन्ने विषयमा सरकारसँग कुनै रणनीति नभएको उनले बताए । सरकार खाली लकडाउन गर्ने, निषेधाज्ञा गर्ने अनी चुप लागेर बस्ने गरेको उनको गुनासो छ । सरकारले हालै बजेट र मौद्रिक नीति ल्याएको भएपनि लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको डंगोलकोे भनाइ छ ।
‘अर्को एउटा मौद्रिक नीति भन्ने पनि आको छ । यो लक्षित वर्गसम्म पुग्नै गाह्रो छ,’ उनले अघि भने, ‘पहिले पनि बिना धितो कर्जा पाउने व्यवस्था आएको थियो तर बंैक जाँँदाजाँदै वाक्क बनाउने ।’
महामारीका कारण ठमेलमा मात्रै कति जना विस्थापित भए, कतिको रोजगारी गुम्यो भन्ने सरकारसँग यकिन तथ्यांक समेत नभएको उनको भनाई छ । डंगोलले ठमेल भित्र मात्रै व्यवसाय सबै घाटामा गएर प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा तीन लाखले रोजगारी गुमाएको बताए । ‘व्यवसाय सबै घाटामा गएर शून्यमा छ’ डंगोलले थपे, ‘ठमेल भित्रमात्रै प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रुपमा तीन लाखले रोजगारी गुमाए ।’
ठमेलका घरबेटीहरु पनि महामारीको चपेटामा परेका छन् । ‘भाडा देउ कसरी भन्ने ? उनीहरुको व्यवसाय नै ठप्प छ । बैंकको ऋण तिर्न नसकेर हाम्रो पनि घर लिलामी हुने अवस्थामा पुगिसक्यो’, ठमेलका एक घरबेटी राजेन्द्र श्रेष्ठले भने ।
ठमेल मात्रै बन्द किन ?
सरकारले अहिले लकडाउन खुकुलो बनाए पनि रात्रीकालीन व्यवसायहरु, दोहोरी साँझ, डान्सबार, क्लबहरु भने खोल्न दिएको छैन । त्यसैले ठमेल दिउँसो र राती दुवै समयमा सुनसान छ ।
परिषदका उपाध्यक्ष डंगोलले अरु ठाउँमा रेष्टुरेन्ट, क्याफे, भट्टिहरु खुल्ला गरेपनि सरकारले ठमेल भने बन्द गरेको बताए । ‘अरु ठाउँ सबैतिर खुला छ त । ठमेललाई मात्र किन बन्द गरेको ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘ कि सरकारको यो ठमेललाई विस्थापित गरेर अर्को नयाँ ठमेल खोल्ने नीति छ ?’
भएका पस्मिना, क्युरी इत्यादी कुहिने अवस्थामा पुगिसकेको उनको भनाइ छ । प्रत्येक वडामा खोपको व्यवस्था गरेर विदेशीहरुलाई नेपाल सुरक्षित छ भन्ने सन्देश सरकारले दिनुपर्ने डंगोलको भनाइ छ ।
« इम्बोस्ड नम्बर प्लेट : चर्चा धेरै काम अति थोरै, अहिलेसम्म कतिले गरे जडान ?
निगमले फेर बढायो ग्यास र पेट्रोलको भाउ, कति पुग्यो ? »